Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण सचेतक चौधरीको प्रश्न : गरिबका आँशु देखेर प्रतिपक्षलाई अलिकति पनि दया लागेन ?
सचेतक चौधरीको प्रश्न : गरिबका आँशु देखेर प्रतिपक्षलाई अलिकति पनि दया लागेन ?
१ असार २०७६, आईतवार १७:४३
काठमाडौँ, १ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचेतक शान्ता चौधरीले गरिवको आँशु देखेर प्रतिपक्षी दलहरुलाई अलिकति पनि दया लागेन भनि प्रश्न गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सचेतक चौधरीले सरकारले गरिब जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चर्को गरी बोल्नेका विषय मात्रै भावनात्मक हुन्छन् ? गरिबका विषय भावनात्मक हुँदैन ?, गरिबका पक्षमा बोल्नै नहुने ? त्यसो भए गणतन्त्र किन चाहियो ? हलो जोत्नेका विषयमा भावनात्मक हुँदैनन्, भगवानका नाममा मान्छेलाई रुवाउन नहुने चौधरीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धर्म हाम्रो आस्था हो, संस्कृति हो, पहिचान हो । मान्छेलाई रुवाएर हाँस्ने भगवान कहाँ हुन्छ ? गरिबका आँशु देखेर प्रतिपक्षलाई अलिकति पनि दया लागेन ?’
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गुठी विधेयकलाई लिएर सडक तथा सदनमा हल्ला गरिरहेको बताउँदै सचेतक चौधरीले कांग्रेसका संसदहरूलाई आफ्नो विगत हेरी सदनमा प्रस्तुत हुन चुनौति समेत दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०४१ सालदेखि गुठी विधेयकमा पटकपटक संशोधन प्रयास भएको छ । २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला गुठी विधेयक संशोधन प्रयास भएको थियो । प्रतिपक्षका सांसदहरूले त्यतातिर मात्रै सोच्नु हुँदैन । काठमाडौं उपत्याकाभित्र र बाहिरका गुठीका समस्या फरकफरक प्रकृतिका भएका छन् ।’
अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठी विधेयकले दुवैका समस्या समाधान दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘दाङको स्वर्गद्वारी गुठीको १२०० बिघा जमिन १६०० घरपरिवारले जोतभोग गरिरहेका छन्। आज स्वार्गद्वारी मन्दिरलाई संरक्षण गर्नेको अवस्था नाजुक छ । त्यतातिर कसैले हेरिरहेको छैन। मन्दीर संरक्षण गर्न आफ्नो हातमा ठेला उठायो ती किसानका पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने ? एउटा मन्दीरको पक्षमा बोलिन्छ, एउटा गुठीयारको पक्षमा बोलिन्छ, ती किसानको पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने ?’